Ciidanka Xoogga dalka oo howlgal ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab ka sameeyay Gobolka Sh/dhexe | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR HIR-SHABELLE Ciidanka Xoogga dalka oo howlgal ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab ka sameeyay...
Muqdisho (SNTV):– Taliska Ciidanka Xoogga dalka qeybta 27-aad ayaa faah faahin ka bixiyay howlgal ay Ciidanka Ciidanka Xooga dalka ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha dhexe,kuwaas oo lagu baacsaday maleeshiyada Al-Shabaab.
Howlgalka ayaa xooggiisa ka dhacay wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar,halkaas oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dhibaateynayeen dadka ku safraya wadadaas.
Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka qeybta 27-aad Maxamed Axmed Tareedisho oo la hadlay warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in Ciidanka Xoogga ay fariisin ka sameysteen deegaano ku dhow wadada si ay Shacabka uga difaacaan cadowga halkaas ku dhibaateeya.
Sidoo kale, Taliye Tareedisho ayaa sheegay in ciidanka Xoogga dalka ay bur buriyeen saldhigyo ay maleeshiyada Al-Shabaab ku lahaayeen gobolka Shabeelaha Dhexe,islamarkaana ay dileen 15-maleeshiyaad iyo horjoogayaal isugu jira.
Darawalada Gaadiidka iyo shacabka qeybahooda kala duwan ayaa soo dhoweeyay howlgalada ay ciidanka Xoogga dalka ay ka sameeyeen wadada xiriirisa Jowhar iyo Muqdisho,halkaas oo ay maleeshiyada Al-Shabaab Shacabka ku dhibaateyn jireen,qaarkoodna inta ay gaariga ka degsadaan kaxeynsan jiray.
Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa dhawaan booqday fariisimo ay Ciidanka Xoogga dalka ka sameysteen deegaanada ku teedsan wadada sida Qalimow iyo Haanta dheer oo ka wada tirsan Gobolka Sh/dhexe oo markii hore shacabka ay qaati kaga taagnaayeen argagixisada Al-Shabaab.
Previous articleXildhibaanada Golaha Shacabka oo maanta akhrinta koowaad marsiiyay sharciga Dakhliga dalka
Next articleHowlgal Miinooyin looga saarayey inta u dhaxeysa Bariire iyo Lambar 50 oo la soo gaba-gabeeyay